UMir 2.4 uza nokuphuculwa kwemizobo ye-API, inkxaso yeX11 kunye nokulungiswa okwahlukileyo | Ubunlog
UMir 2.4 uza nophuculo kwi-API yemizobo, inkxaso yeX11 kunye nolungiso olwahlukeneyo
Kutshanje iqela leCanonical ngasemva kophuhliso lweseva yokubonisa iMir, Ikhutshwe inguqulelo 2.4 kwaye ibandakanye uthotho lwezilungiso ze-bug kunye notshintsho olunxulumene nokunikezela ukuphucula kwi-Graphics API.
Kulabo abangaziyo ngeMir, kufuneka bazi ukuba kukho iserver yesikrini ephuhliswe yiCanonical, ngaphandle kokuba ndilushiyile uphuhliso lweqokobhe lobumbano kunye nohlelo lwe-Ubuntu lwee-Smartphones.
Mir isafuneka kwiiprojekthi zeCanonical kwaye ngoku ndiyazie isikhundla njengesisombululo se Izixhobo ezifakiwe kunye ne-Intanethi yezinto (yasebukhosi-). I-Mir inokusetyenziswa njengeseva edityanisiweyo yeWayland, ivumela nasiphi na isicelo esisekwe kwi-Wayland (umz. Eyakhelwe nge-GTK3 / 4, Qt5, okanye i-SDL2) ukuba isebenze kwindawo esekwe kwi-Mir.
Umaleko wokuhambelana kweX, XMir, usekwe kwiXWayland, Ngelixa ezinye iindawo zeziseko zophuhliso ezisetyenziswa nguMir zivela kwi-Android. La malungu afaka isitaki sokufaka se-Android kunye neProtokholi yeGoogle Protocol. Mir Okwangoku isebenza kwizixhobo ezahlukeneyo zeLinux, kubandakanya iidesika zemveli, i-IoT, kunye neemveliso ezifakiwe.
Iseva yemizobo ye-Mir yenza abavelisi besixhobo kunye nabasebenzisi bedesktop ukuba babe neqonga elichazwe kakuhle, elisebenzayo, eliguquguqukayo nelikhuselekileyo kwimeko yemizobo.
1 Izinto eziphambili ezenziwayo zeMir 2.4
1.1 Uyifaka njani iMir kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Izinto eziphambili ezenziwayo zeMir 2.4
Kule nguqulo intsha yeMir 2.4 Umsebenzi wenziwe ukuphucula ukulungelelaniswa kwee-API ye-Mir enxulumene nenkxaso yeqonga lemizobo lokusetyenziswa kweenkqubo ngemizobo eyi-hybrid. Kukhankanyiwe ukuba ngokukodwa, mg :: Iqonga le-API lahlulwe laba yi-DisplayPlatform kunye neRenderingPlatform, Ukuvumela ukuba usebenzise ii-GPU ezahlukeneyo ekunikezeleni nasekuhambiseni.
Enye into emitsha ebonakalayo yile Umsebenzi ophuculweyo we-Mir kwiqonga le-X11, Kuba kolu hlobo lutsha lweMir ikhowudi yenkxaso yeqonga le-X11 yahanjiswa ukusuka kwi-XLib yaya kwi-XCB, amandla okwenza ubungakanani kwakhona ngobungakanani besicelo esisekwe kwi-Mir esiboniswe kwimeko yeX11.
Kukwakhankanyiwe ukuba uninzi lolungiso lwenziwe ukuxhasa iWayland neXwayland kwaye yongeza "-driver-quirks" ukhetho kwi-gbm-kms ukukhuphela ngaphandle ukukhangela izixhobo ezingaphumeleli.
Ukusuka kwizilungiso zebug ezenziwe kule nguqulo intsha ye-Mir 2.4:
Indawo yesikhombisi esisigxina kwiziphumo ezilinganisiweyo
Ukujongana notshintsho lwesimo esiphambili xa iwindow ingajoliswanga
Ukuphathwa ngokuchanekileyo kweempazamo zeXWayland
Thumela ii-Callbacks ezingafakwanga simahla emva kwexesha
Ukutshintsha ubungakanani beendawo zeqokobhe
Ukujonga ukuba ngaba isikhombisi sitshixiwe ngaphambi kokuthumela intshukumo yesikhombisi
Okokugqibela, ukuba unomdla wokwazi okungakumbi ngale nguqulo intsha, unokujonga iinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Uyifaka njani iMir kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Iiphakheji zokufakelwa kwale nguqulo intsha zilungiselelwe Ubuntu 18.04, 21.04 kunye 20.04 (PPA) kunye neFedora 34,33 kunye ne32.
Kulabo abanomdla wokukwazi ukufaka le seva yemizobo kwiinkqubo zabo, Into ekufuneka bayenzile kukuvula i-terminal kwiinkqubo zabo (bangayenza ngokudibanisa isitshixo Ctrl + Alt + T okanye ngeCtrl + T) kwaye siza kuchwetheza le miyalelo ilandelayo:
Ngale nto, indawo yokugcina sele yongezwa kwinkqubo yakho, ngaphambi kokufaka i-graphical server kuyacetyiswa ngokupheleleyo ukuba ukuba usebenzisa abaqhubi babucala kwinkqubo yakho kwikhadi lakho levidiyo okanye ngokudibeneyo, tshintsha oku kubaqhubi basimahla, oku ukuze kuthintelwe ungquzulwano.
Nje ukuba siqiniseke ukuba sisebenza ngokuqhutywa simahla, sinokufaka iserver ngokusebenza kwisiphelo sendlela:
Ekugqibeleni kuya kufuneka uqale inkqubo yakho ukuze iseshoni yomsebenzisi neMir ilayishwe kwaye ukhethe oku kwiseshoni yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Imizobo » UMir 2.4 uza nophuculo kwi-API yemizobo, inkxaso yeX11 kunye nolungiso olwahlukeneyo
Qpdf, isixhobo sokucinezela, ukwahlula, ukudibanisa kunye nokujikeleza i-PDF
IPlasma 5.22 ifika ngokusebenza okuphuculweyo kwaye ithi ndlela-ntle kwi-KSysGuard